Somaliland iyo Puntland oo isku heysta maamulida dagmada Badhan – Somali Top News
Saraakiil ka tirsanaa Ciidanka Somaliland iyo ciidamadooda oo ka baxay taliska Somaliland ee gobolka Sanaag ayaa ku biiray ciidamada Puntland ee ku sugan degmooyin ka tirsan Gobolka Sanaag oo ay isku heystaan Maamulada Puntland iyo Somaliland.
Wararka aan ka helayno Gobolka Sanaag ayaa sheegaya in Saraakiisha iyo ciidankoodo isku dhiibeen Puntland kadib markii ay diideen amar uu siiyay taliyaha ciidamada Somaliland oo ku amray in ay weerar ku qaadan degmada Badhan ee gobolka Sanaag si ay halkaasi uga saaraan wefdi ka socda Puntland oo uu hugaaminayo Gudoomiyaha Baarlamaanka Puntland Cabdixakiin Maxamed Axmed (Dhoobo).
Gudoomiyaha Baarlamaanka oo ku sugan magaalada Badhan ee gobolka Sanaag ayaa xalay hoygiisa ku booqday suldaanka guud ee gobolka Sanaag suldaan Siciid suldaan Cabdisalaan garaad Maxamuud Cali Shire.
Magaalada Badhan ee gobolkaasi waxaa haatan socdaal ku jooga guddoomiyaha Baarlamanka Puntland wasiirka Amniga iyo saraakiil ka tirsan ciidamada Daraawiishta iyo Booliiska Puntland oo doonay in ay iyagu maamulaan.
Wasiirka Cadaalada Somaliland Cabdirisaaq Cali Cabdi ayaa maalmii ugu danbeeyay ku sugnaa deegaanka Damala Xagarle oo isna halkaasi wada olole uu doonaya in Maamulka Somaliland ay gaaraan Degmada Badhan.
Degmooyinka iyo deegaanada Gobolka Sanaag ayaa ah kuwo u qaybsan Maamulada Somaliland iyo Puntland oo isku haysta cida Maamulaysa.
← Regional partnership underway to help Somalia enforce the ban on illegal charcoal trade
EFF: Cabinet an insult to the intelligence of South Africans →
Iskaashi iyo xiriirk cusub oo u bilowday maamul goboleedyada Puntland, Hirshabelle iyo Koofur Galbeed
Ciidamada Federalka Itoobiya Iyo Kuwa Liyuu Boolis Oo Qarka U Saaran Iney Dagaalamaan